မြားများ: ပျော်ရွှင်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း(Make me happy)
ပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ခြင်း(Make me happy)
ပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ခြင်းတဲ့.။ မိုးထက်အိမ်က ပြောလာတယ်..။တကယ်တော့ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ဒီလို ခေါင်းစဉ်မျိုးကို သိပ်ပြီး.မစဉ်းစားဖူးပါဘူး.။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရော ပျော်ရွှင်အောင် နေနိုင်ခဲ့သလားဆိုတာတောင် သေချာမှ မသေချာတာ..။ ကိုယ်ကြုံခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာက မြို့ပြဘဝ ယဉ်ကျေးမှု အပြည့်အစုံနဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာ ငွေနဲ့ စပ်ယူလို့ ရတယ်ဆိုတဲ့ လူတန်းစားတွေ.။ သူတို့ ဘယ်လို နေတယ် ထိုင်တယ် ဆိုတာက အစ ဂုဏ်ယူနေချင်တဲ့ လူမျိုးတွေ.။ အဲဒီတော့ကိုယ်က စဉ်းစားကြည့်မိတယ်.။ သူတို့ ပျော်ရွှင်သလားပေါ့။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ကလည်း သူတို့နဲ့ အိန်းနီးနားချင်းမို့သာ တွေ့နေ မြင်နေကြားနေရတာ.။သူတို့နဲ့က စကား ဆယ်ခွန်းပြည့်အောင် ပြောဖူးတာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ နောက်ဆုံးပေါ် အကောင်းစား ပစ္စည်းတွေ သုံးကြတယ်.။ အဆင့်မြင့်မြင့် နေရာတွေကို ခေတ်မီမီ သွားနိုင်ကြတယ်.။ သူတို့ ပျော်ရွှင်နေတယ်လို့ ကျွန်တော်က ထင်မိတယ်.။ ဒါပေမယ့် သူတို့ မိသားစု စုံစုံ ညီညီနဲ့ ထမင်း အတူတူ မစားဖူးဘူ.း.။ ဘုရား မသွားဖူးဘူး.။
ပျော်ပျော်ပါးပါး.။ စည်းစည်းလုံးလုံး နေကြတာ တခါမှ မတွေ့ဖူးဘူး.။ အဲဒါတွေကို အမေ့ကို ပြောပြဖူးတယ်.။ အမေက ငါ့သားမှတ်ထား.။မိသားစုဘဝ(လူ့ဘဝဆိုတာပါ ပြောချင်ပုံ ရသည်) ဆိုတာ ငွေကြေး အပြည့် အစုံနဲ့ လိုတိုင်း တလို့ ဖြစ်နေမှ ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့.။ သားတို့ ငယ်ငယ်က ကျောင်းက ဆရာမတွေ မသင်ဖူးဘူးလား.။ ရှိတာလေးနဲ့ လှအောင်ဝတ်တို့.။ ရှိတာလေးနဲ့ လောက်အောင်စားတို့.။ အဲလိုမျိုး အများကြီး အမေက ပြောပြဖူးပါတယ်.။ အမေဟာ ပညာ(ခေတ်ပညာ) မတတ်ပါဘူး.။ ဒါပေမယ့် အမေဟာ သူ့ဘဝမှာ ဘယ်လို နေထိုင်ရမယ်ဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိပါတယ်.။ အမေက တောသူရိုးရိုးကြီးဆိုတော့ သူ့တသက်မှာ နှုတ်ခမ်းနီတောင် မဆိုးဖူးပါဘူး။(အမေ ပြောပြဖူးတာပါ)။ အမြဲတမ်း ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ ဝိုင်းထိုင်ပြီး ဘဝမှာ ဘယ်လို ရောင့်ရဲ တင်းတိမ်ပြီး နေထိုင်နိုင်ရမယ်ဆိုတာ အမေက သွန်သင် ပြောပြလေ့ ရှိပါတယ်.။ ကျွန်တော် ရွာပြန်တိုင်းလည်း အမေက ပြောနေဆဲပါ.။ ခုနေ ကျွန်တော် အိမ်မှာ မနေဘဲ တခြား မြို့ပြမှာ
နေထိုင်နေလည်း အမေကတော့ တခြား ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေကို အမြဲ ပြောနေလိမ့်ဦးမယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်မိပါတယ်.။
ကျွန်တော့်ကို ဘဝမှာ ဘယ်လို ပျော်ရွှင်အောင် နေထိုင်တတ်ရမယ်ဆိုတာ အမေက အကောင်းဆုံး လမ်းညွှန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်.။ ငယ်ငယ်က ကျောင်းသွားခါနီး အမေက ရေချိုးပေးတဲ့ အခါတိုင်း ပျော်ပါတယ်.။ ကျောင်းဝတ်စုံ သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်လေး ဝတ်ပေးရင်လည်း ကျွန်တော် ပျော်ရွှင်ပါတယ်.။ ထမင်းချိုင့်လေးထဲကို ပဲပြုတ်နဲ့ ကြက်ဥကြော်လေးထည့်ပေးရင်လည်း ပျော်ပါတယ်.။ အဖေက မြို့က ပြန်လာတိုင်း ရွှေသွေး၊မင်္ဂလာမောင်မယ် စာစောင်လေးတွေ ဝယ်လာတိုင်း အဲဒါတွေကို ဖတ်ပြီးလည်း ဝမ်းသာ ပျော်ရွှင်ပါတယ်။(အမေက ဘဝကို ဘယ်လိုပျော်ရွှင်ကျေနပ်စွာ နေထိုင်ရမယ်ဆိုတာ သင်ပေးခဲ့တယ် ဆိုရင် အဖေက ကျွန်တော့်ကို စာဖတ်ဝါသနာ မျိုးစေ့ ချပေးခဲ့သူ ပေါ့ဗျာ.။ ဤကား စကားချပ်)
နောက်ပိုင်း ကျွန်တော် အိမ်မှာ မနေဖြစ်တော့ မြို့မှာ ကြုံသလို နေတော့ တယောက်တည်း ဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ် ကို အမြဲ နှစ်သိမ့်ပြီး ပျော်ရွှ့င်စွာပဲ နေနိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်.။ အလုပ်ထဲ ရောက်ရင် ကိုယ် လုပ်ရမယ့် အလုပ်၊ သူလုပ်ရမယ့် အလုပ် ခွဲခြား မနေပဲ တတ်နုိူင်သလောက်အကုန် သိမ်းကျုံး လုပ်ပြီး အများရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို ရပြီး ကျေနပ်ပျော်ရွှင် နိုင်ခဲ့ပါတယ်.။ တကယ်တော့ အခြားဘက်က ကြည့်ရင် အဲဒါဟာ အရာဝင်ချင်လို့ နေရာတကာ လျှောက်လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး.။ အဲလို အများရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို ရပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်နိုင်အောင် လုပ်ယူခဲ့တာပါ.။ ကိုယ့်အတ္တက ရှေ့က လာပြီးသားလို့ သဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်.။ တကယ်တော့ ဒါဟာ ကိုယ့် ပျော်ရွှင်မှုကို ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်ယူ ခဲ့တာပါ.။
ကျွန်တော်ကတော့ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပျော်ပျော်နေတတ်ခဲ့ပါတယ်.။ ငွေရေး ကြေးရေးထက် ကိုယ့်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုပဲ ဦးစားပေးခဲ့တာချည်းပါပဲ.။တကိုယ်ရေ တကာယ သမားဖြစ်တော့ အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေတွေနဲ့ စိတ်တူ ကိုယ်တူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေနိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့ရတာချည်းပါပဲ.။ အဲဒီလို ကိုယ်က လိုက်ပြီး ပေါင်းစည်း နေရတာကိုလည်း ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ရပါတယ်.။ ဥပမာ အလုပ်ထဲမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကြောင့် တခြားတယောက် အနှောက်အယှက် ဖြစ်နေပြီဆိုရင် ကျွန်တော် မနေတော့ဘဲ ပျော်ရွှင်စွာ ပဲ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်.။ ဒါဟာ ပြဿနာတစ်ခုကို ရင်မဆိုင်ချင်လို့ ရှောင်ထွက်သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး.။ အကောင်းဆုံးက ဒီတနည်းပဲ ရှိတာမို့ပါ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ဘယ်တဦးတယောက် အပေါ်မှ စိတ်မကွက်မိပါဘူး.။ ကျွန်တော် ပျော်ရွှင်စွာပဲ နောက်ဆုတ်ခဲ့တာချည်းပါ.။ ပြီးတော့ ကိုယ်က တယောက်တည်း သမား၊ သူတို့က မိသားစုနဲ့ ဆိုတာလည်း အမြဲ ထည့်တွက်ပါတယ်။ (ကိုယ်ရည်သွေးတယ် မထင်စေချင်ပါး))
တခါတခါ ရည်းစားနဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်တာ၊ လူတချို့နဲ့ သဘောထားကွဲလွဲတဲ့အခါ စိတ်ထိခိုက် ပေါက်ကွဲ ရတာ မှန်ပေမယ့် အနှေးနဲ့ အမြန် ဆိုသလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖြေဆည်ရာ အမြဲ ရှာနိုင်ခဲ့တာ ချည်းပါပဲ။ ဆူဆူညံညံ လူတချို့နဲ့ ဝေးဝေးမှာ နေရာတာကို ပျော်ပါတယ်။ မဖတ်ရသေးတဲ့ စာအုပ်တအုပ် ကိုယ့်လက်ထဲ ရောက်လာရင်လည်းပျော်ပါတယ်.။ မနက်စောစော အိပ်ယာထ ရေးအေးအေးတခွက်ကို တဝကြီး သောက်လိုက်ရတာလည်း ပျော်ပါတယ်.။ လယ်တီဆရာတော် ဘုရားရဲ့ ပရမတ္တ သံခိပ်တွေ ဖတ်ရတာလည်း ပျော်ပါတယ်.(ပါဠိ-မြန်မာ အဘိဓာန် စာအုပ်ကြီးဘေးမှာချထားတာပြီးလိုက်ရှာနေရတာကိုး။ပျင်းရိချိန်ကို မရှိပါဘူး)။ အဲ တခါတခါ အလုံးလိုက် ဝင်လာတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို တရက်နှစ်ရက်တည်း အပြတ်သုံးပစ်ရတာလဲ..ပျော်တတ်ပါတယ်.။ နောက်ရက်ကျမှ စားစရာ မရှိလည်း. စာအုပ် အဟောင်း တစ်အုပ် နှစ်အုပ်လောက် သွားရောင်းစားပါတယ်။.း)
ပြောမယ့်သာ ပြောရတာပါ.။ တကယ်တော့ ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာ သူ့ချည်းပဲ မလာပါဘူး.။ သူနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ဝမ်းနည်းမှု စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ရမှုတွေလည်း ကပ်လျက် ပါလာတတ်ပါတယ်.။ ဒါကတော့ ခပ်တုံးတုံး ဥပမာနဲ့ ပြောရရင် လောကရဲ့ သဘာဝ တစ်ခုလို့ပဲ ပြောရမှာပါ.။ဦးပေါ်ဦးစကားနဲ့ ပြောရရင် ဆားလေးနဲ့ပါ ဘုရား ဆိုသလိုမျိုးပေါ့.။ တခါက ကြုံဖူးတယ်.ဗျ။ သင်္ကြန်တွင်းမှာပါ.။ သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးနဲ့တော်တော် ပျော်စရာ ကောင်းပါတယ်.။ အဲဒီမှာ မြစ်(ရွှေလီမြစ်)ထဲမှာ ရေသွားဆော့ကြတော့ တယောက်နဲ့တယောက် ရေနဲ့ပက်လိုက် သဲနဲ့ ပက်လိုက် စနေ နောက်နေကြတာ.။ အတော်ကြာရင် ဝမ်းနည်းစရာ တခုခု ကြုံရတော့မယ်လို့ ဘယ်သူက ကြိုသိနိုင်မှာတုန်း။ အစက ကျွန်တော်က သူငယ်ချင်း ကောင်းမလေး တယောက်ကို ရေနဲ့ ပက်ပြီး စ လိုက်၊ သဲနဲ့ လှမ်းပက်ပြီး စလိုက်ပေါ့ ။ ပျော်နေကြပါတယ်.။ခဏနေတော့ အဲဒီကောင်မလေးကို သဲနဲ့ လှမ်းပက်ရင်း စလိုက်တာ ဆုပ်ထားတဲ့ သဲထဲမှာ ကျောက်ခဲ ပါသွားတယ် ခင်ဗျ။ သူ့နဖူးကို မှန်တာ
ပေါ့ဗျာ။ နဖူးကွဲသွားတာပေါ့။ အဲကောင်မလေး ငိုလိုက်တာ ပြောမနေပါနဲ့တော့.။ ဘယ်သူ ချော့ချော့ မရတော့ပါဘူး.။ အခြေအနေက ပျော်ရွှင်စရာကနေ ရုတ်ချည်း စိတ်မကောင်းစရာ ဖြစ်သွားတာပေါ့.။ အဲလိုမျိုးကို ကြုံဖူးတာပါ။။
လူတိုင်း အတွက် ပျော်ရွှင်မှုဟာ မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါတယ်. ခင်ဗျာ။(အောက်ဆီဂျင် လိုသလို ပရိုတိန်း လိုသလိုပေါ့)။ အဲဒီ ပျော်ရွှင်မှုကိုလုပ်ယူတဲ့ နေရာမှာသာ ညစ်ညမ်းမှုနဲ့ တွဲလျက် မနေသင့်တာာပါ.။ ဒီဘက်ခေတ်မှာ ခေတ်စားလာတဲ့ အငြိမ့်တွေပေါ့ဗျာ.။ မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်တွေ ဘာညာ လျှောက် ပြောနေပြိး. လုပ်လိုက်ရင်တော့ အငြိမ့်မင်းသမီးကတဲ့ သီချင်းနဲ့ ကကွက်က နည်းနည်း လူရွှင်တော်(လူပြက်)တွေ ပြက်တဲ့ ပျက်လုံးတွေက မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ခပ်များများ.။ ခင်ဗျားတို့လည်း ကြားဖူးမှာပေါ့။ မိသားစုဝင်တွေ အတူတူ ထိုင်ကြည့်လို့မရတဲ့ ခါးအောက်ပိုင်း ပျက်လုံးတွေချည်းပါပဲ.။ အဲဒါကို မြန်မာဗီဒီယို ဆင်ဆာ အဖွဲ့က ခွင့်ပြုပါသတဲ့.။ ဒါလည်း ကျွန်တော်တို့ ယဉ်ကျေးမှု
အစဉ်အလာ ထိန်းသိမ်းတယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာ လူမျုိးတွေ တရှိူက်မက်မက် ထိုင်ကြည့်ကြတာ တွေ့ရပါတယ်.။ အဲလိုမျိုး အဆင့်အတန်း မရှိ၊ အပေါစား ဟာသ တွေအတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်။. တကယ်တော့ ပျော်ရွှင်မှု အစစ်ဆိုတာ စင်ကြယ်မှုနဲ့ ခွဲမရတဲ့ အရာဟု ပြောကြတာ မှတ်သားရဖူးပါတယ်.။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများလည်း. တကယ့် ပျော်ရွှင်မှု အစစ်ကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိကြပြိး ဘဝကို လွတ်လပ်
ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်း သွားနိုင်ကြပါစေကြောင်း………….။ ။